SAUDIA waxay 2021 -kii u caleemo saartay Duulimaadka ugu Hormarsan Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » SAUDIA waxay 2021 -kii u caleemo saartay Duulimaadka ugu Hormarsan Adduunka
Airlines • Airport • Aviation • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
SAUDIA waxay soo bandhigtay badeecooyin cusub oo kala duwan iyo kor u qaadista astaamaha jira, casriyeynta khibradda martida. Dadaallada kala duwan waxaa ka mid ah saxeexa Chef-on-board adeega cuntada ee la carte; ku-cunid-dalbasho; wanaajinta isku -xirnaanta internet -ka ballaaran; qorshayaasha farriinta bilaashka ah ee dhammaan kaabayaasha; iyo madal madadaalo oo cusub.
Shirkaddu waxay ku guuleysataa abaalmarinta Skytrax markii labaad muddo afar sano gudaheed ah waxayna sii wadaysaa socodkeeda sare.
SAUDIA waxay kor u qaadday 26 baro; horumar 55% ah guud ahaan qiimeynta Skytrax ee shirkadaha diyaaradaha adduunka.
Abaalmarintu waxay caddaynaysaa xaaladda shirkadda duulimaadka oo ah diyaarad caalami ah oo baaxad leh, iyada oo si joogto ah u cusboonaysiisa adeeggeeda saaran iyo qurxinta cuntada.
Skytrax ayaa maanta ku dhawaaqday in SAUDIA ay tahay Diyaaradda ugu Hormarsan Adduunka ee 2021. Waa markii labaad ee SAUDIA ay ku guuleysato abaalmarintan tan iyo 2017. Sannadkaas, markabka calanka Sucuudiga ayaa si cajiib ah uga booday 82nd si 51st booska, horumar 40% ah. Sannadkan, si kastaba ha ahaatee, SAUDIA waxay ku fiicnaatay 55% cajiib ah oo hadda waxay ku jirtaa kaalinta 26aad Skytrax darajaynta shirkadaha duulimaadyada caalamka.
In lagu abaalmariyo abaalmarintan abaalmarintu waxay ka tarjumaysaa u-heellanaanta tayada iyo hagaajinta wax-qabadka ee qaybaha abaal-marinta kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaalaha kabka, cuntada & sharaabka, madadaalada duulimaadka iyo waxyaabo kaloo badan.
The Skytrax abaal -marintu waxay timaaddaa mar kale oo muhiim ah SAUDIYAIsbedelka socda oo horseeday dhowr abaalmarino iyo aqoonsiyo kale. Qorshayaasha badbaadada caafimaadka ee shirkadda diyaaradda si loo hubiyo badbaadada rakaabka inta lagu jiro aafada COVID-19 ayaa soo jiitay abaalmarino caalami ah.
Iyada oo leh shabakad waddo oo ka badan 95 meelood iyo diyaarad 145 diyaaradood ah - oo ka shaqaysa mid ka mid ah maraakiibta ugu da’da yar adduunka - SAUDIA waxay ku jirtaa jahawareer kor u kaca kororka sii socda ee suuqyada caalamiga ah.
Diyaaradda Sacuudi Carabiya Agaasimaha Guud, Mudane Eng. Ibrahim Alomar wuxuu yiri, “Sharaf bay ii tahay inaan ku helo abaalmarintan anigoo matalaya dhammaan kooxda SAUDIA oo muujisay sida ay uga go’an tahay raacitaanka heerarka ugu sarreeya adduunka - laga bilaabo caafimaadka iyo badbaadada illaa badeecadda iyo khibradda. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u muujiyo qaddarinta iyo mahadnaqa qotada dheer ee SAUDIA u -hayaha Labada Masjid ee Barakeysan, Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, iyo Sarreeyaha Boqortooyada Amiir Maxamed Bin Salmaan taageerada joogtada ah ee ay siiyaan SAUDIA, calanka Boqortooyada. Waxa kale oo aan hambalyo u dirayaa Guddoomiyaha SAUDIA Mudane Eng. Saleh Al Jasser iyo inta kale ee Guddiga Agaasimayaasha ee ku saabsan guushan. ”